Ike nke iri abụọ na otu WordPress Theme | Martech Zone
Na ngwụsị izu, agbanwere m nke m WordPress isiokwu laghachi Iri abụọ na otu. Apụrụ m ikwu n’eziokwu na obi dị m ụtọ na imepụta ya ugbu a. Emeela m ya ka ọ masị m, anaghịdị m emetụ koodu ahụ aka. Ugbu a emehiela m, enwere oge mgbe m na-enwe mmasị ịmị mmiri n'ime isiokwu na ịpị ihe na ya, mana ịde blọgụ siri ike dịka ọ dị. Achọghị m nrụgide ọ bụla gbasara atụmatụ a na-agaghị akwụnye, ma ọ bụ na-echegharị njehie n'ihi na anaghị atụgharị ụfọdụ data n'ụzọ ziri ezi. Ugbu a, m nwere ike ilekwasị anya na ịde blọgụ.
Iri abụọ na iri na otu isiokwu bụghị naanị na ọ mara mma ma na simplistic, ma na-siri ike ma na vasatail vasatail. Ọ bụ ndị otu WordPress mere ya, nke pụtara na ndị mmadụ ghọtara nke ọma ma ghọta nke WordPress na arụpụtala isiokwu iji chịa ihe niile.
Iri na abụọ na iri na otu atụmatụ:
Atụmatụ agba na Ọchịchịrị
Gbanwee agba njikọ
Kọlụm abụọ, akụkụ aka nri; Kọlụm abụọ, akụkụ aka ekpe aka ekpe; Otu kọlụm, enweghị sidebar
Asaa dị iche iche post ịhọrọ site na
Gbanwee onyogho na / ma obu agba
Ngosiputa / zoo nkụnye eji isi mee
Gosi / zoo ihe onyonyo
A na - emezi nhọrọ ndị a niile site na nchịkọta menu dị Ọdịdị.
Ewezuga atụmatụ agbakwunyere isiokwu ahụ, ị ​​na-enwetakwa ihe ị ga-atụ anya ya site na isiokwu WordPress zuru ezu:
Ihe onyonyo gosiputara na post ọ bụla
Ngwa wijetị zuru ezu
Ihe nestable kwuru
SEO enyi na enyi, ọ bụ ezie na ị ga-atụle iji Yoast WordPress SEO plugin
Ihe ikpeazu ichoro bu itinye ihe WP Touch ngwa mgbakwunye na ị dịla njikere maka mobile, oke! Amaara m mmetụta nke ịchọ ịmebe / isiokwu kachasị mma maka saịtị m - ọkachamara na nke onwe. Ọ dị mfe ịhapụ ihe mgbaru ọsọ gị n'ezie: ịde blọgụ! Iri na abuo na-bụ a free ngwá ọrụ ị kwesịrị iji tinye n'ọrụ iji belata ahụhụ nke ịmepụta na ijikwa isiokwu WordPress.
Tags: akpaakabmw akaradatasiftspammers
Dee 5, 2011 na 11: 55 AM
Ekwenyesiri m ike na gị, mana na-efu otu ihe na isiokwu 2011 - ọ naghị akwado sidebar na post na ibe, yabụ oge ọ bụla mgbe ị debere blog na oge a ịkwesịrị ịgaghachi ma dezie single.php na ibe .php faịlụ.
Enwere m ike ịtụ aro ka m gaa http://www.borgyborgy.net Ọ na-enye ụfọdụ isi 1000 × 288 pixel size nkụnye eji isi mee, hazie ndabara TwentyEleven isiokwu. Ọ bara uru maka ndị mbido blọgụ. Ọ na - enye gị ohere ịhazi nrụnye ọkọlọtọ n’ụzọ dị mfe, na - ekwe ka ọhụụ ọhụụ nwee blọgụ ahaziri iche na nke dị njikere n’ime nkeji ole na ole. Ihe oyiyi niile ka m weere ma nye n'okpuru License Creative Commons 3.0.